Wenza ntoni uSemalt kwaye ngoba?
Unceda njani uSemalt nge-SEO?
Yintoni iWebhusayithi yoHlaziyo
Unceda njani uSemalt ngohlalutyo lwebhusayithi?
I-Semalt yi-arhente yentengiso egcwele ngokupheleleyo enikezela uluhlu lweenkonzo eziphambili zokunceda amashishini akhule kumanqanaba amatsha: I-AutoSEO, i-FullSEO, i-Semalt Web Analytics, ukuPhuhliswa kweWebhu, ukuvelisa iVidiyo kunye nezinye iinkonzo.
I-Semalt yasungulwa ngonyaka ka-2013 kwaye inesithuba esimalunga neshumi serekhodi elide ekuncedeni amashishini ukufikelela kumanqanaba amatsha ezothutho kunye nenqanaba lokukhula ngokusebenzisa izixhobo ezinqabileyo ze-SEO, i-analytics kunye neendlela zokwenza iintengiso ezenziwe ngokwezifiso.
I-Semalt inceda amashishini ukuba aphumelele ngakumbi ngokuphucula i-SEO yazo, ngokuphucula iziphumo zokuthengisa ngokusebenzisa ii-analytics zewebhusayithi kwaye ngokunikezela uluhlu lwezinye iinkonzo eziphambili ezifuneka amashishini amaninzi ekukhuleni njengokuphuculwa kwewebhu kunye nemveliso yevidiyo kubandakanya iividiyo ezichazayo.
I-Semalt inomsebenzi wokunceda ngamnye wabathengi bakhe ukuba bafezekise amanqanaba empumelelo ngokubonelela ngohlahlo-lwabiwo-mali olunexabiso le-SEO kunye neenkonzo zokuthengisa.
USemalt ukhankanya ukuba injongo yakhe kukunceda abaxumi bayo ukuba bafikelele kwinqanaba eliphambili kuGoogle nakubomi. Izamela ukubonelela abathengi bayo ngenkonzo ebaphendulayo yabathengi kunye noluhlu lweenkonzo zentengiso ezinokubakho abanokuziphumeza kulo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali.
I-SEO okanye ukukhangela kweinjini yokukhangela yinkqubo yokufumana ukugcwala ngakumbi kwiziphumo zokukhangela kwendalo.
Yonke injini yokukhangela enkulu (iGoogle kunye ne-Bing) inoluhlu lweziphumo eziphambili zophando ezibandakanya iphepha lewebhu kunye nolunye uhlobo lomxholo onjengeevidiyo kunye neposti yemidiya yoluntu.
Ukusebenza kweinjini yokukhangela yinkqubo yokufumana iphepha lewebhu kunye neshishini ukuze ubonakale ngakumbi kwezi ziphumo. Yinkqubo enemigangatho emininzi ebandakanya ukukhethwa kwamagama asezitshixo, ukwakha ikhonkco, ukulungiswa kwiphepha kunye namanye amanyathelo aqhubekayo.
Kumfanekiso olapha ngezantsi, i-SEO ibhekisa ekuncedeni iwebhusayithi yakho ibonakale kwindawo “ebonakalayo” apho iiwebhusayithi ziya kuthi zibekwe khona phezulu emva kokuba imizamo ye-SEO iphunyeziwe ngelixa iboniswa kwindawo “ehlawulelweyo” ixabisa enye yezi webhusayithi imali ngokuchofoza ngokuhlawula (PPC) intengiso.
Ukusukela ngo-2013, uSemalt uncede uluhlu lwamashishini ngokuphucula ukusebenza kweinjini yokukhangela kwaye unerekhodi ende yamabali empumelelo ebangelwe yimizamo yabo.
Namhlanje uSemalt unceda amashishini ngenjini yokukhangela ubukhulu becala ngokusebenzisa iinkonzo ezimbini eziphambili: I-auto SEO kunye ne-SEO epheleleyo, ezichazwe apha ngezantsi.
I-Semalt ikwabonelela ngoNxibelelwano lwe-SEO yasimahla ukunceda amashishini ukuba abonise ukuba zeziphi iimfuno zawo kwaye athathe isigqibo phakathi kweephakheji ezimbini phakathi kwezinye iinkonzo ezibonelelwa yinkampani.
I-Auto SEO yinkonzo yokungena kwe-SEO yemfundo ka-Semalt enikezela uluhlu lweempawu ze-SEO ngexabiso eliphantsi kakhulu. Ezi nkonzo zibandakanya: ukwenziwa kwekhasi, ukwakha ikhonkco, uphando lwamagama aphambili, ukuphuculwa kokubonakala kwewebhusayithi kunye nohlalutyo lwewebhu.
I-Semalt ibonelela ngolu khetho oluhle kumashishini aphuma emhlabeni okanye angaqinisekanga ukuba aqale ngaphi na ngenjini yokukhangela. I-Auto SEO ifaka i-injini emhlophe yokukhangela i-injini yokukhangela i-optimization yokunceda iiwebhusayithi zikwazi ukufikelela kwinqanaba eliphezulu ngokukhawuleza.
Kubiza nje i- $ 0.99 yokuqalisa ngovavanyo lweentsuku ezili-14 lwe-Auto SEO, kwaye ukusuka apho iindleko zisengqiqweni malunga ne- $ 99 ngenyanga ngezaphulelo kwiinyanga ezi-3, iinyanga ezi-6, kunye nokuthengwa konyaka.
Ngenxa yokuba i-Auto SEO ibonelela ngexabiso eliphantsi elinje, le nkonzo iye yaziwa kakhulu phakathi kweenkampani zokuqalisa kunye nezo zikhangela ukufumana isithuthi esinye ngokusebenzisa iinzame zokuqala zokukhangela i-injini yokukhangela ngaphandle kokuzibophelela kuhlahlo-lwabiwo mali lwenyanga oluphezulu olufunekayo kwezinye iiarhente.
I-SEO epheleleyo iyindlela yesibini ephezulu enikezelwa nguSemalt ebonisa uluhlu lweempawu kwinqanaba eliphezulu lenkonzo kune-Auto SEO.
I-SEO epheleleyo inikezela ngepakeji ebanzi ebandakanya: ubhalo lomxholo, ukwenziwa kwangaphakathi, ukulungiswa kweempazamo kwiwebhusayithi, umvuzo wokudibanisa, inkxaso eqhubekayo kunye nokubonisana kunye naziphi na iinkonzo ezongeziweyo ezinokuthi zifunwe ngumthengi.
Abathengi be-SEO epheleleyo ye-Semalt babandakanya iinkampani ezinkulu ze-e-commerce kunye nabaphathi bewebhu kunye nabaqalisi bokuqalisa. Zintathu iindlela onokukhetha kuzo ezikhoyo ze-SEO epheleleyo: ezasekhaya, kwilizwe liphela okanye zehlabathi jikelele ngokuxhomekeke kwingingqi umthengi afuna ukujolisa kuyo.
I-SEO epheleleyo lukhetho olufanelekileyo kumashishini aqala ukungena kwinqanaba lokukhula kwaye kufuneka aqinisekise ukuba iwebhusayithi yawo iyahambelana nemigangatho ye-SEO, ukuba naziphi na iimpazamo ze-SEO zincitshisiwe, kunye nezo zifuna iziphumo zexesha elide ze-SEO kunye nexesha elide.
Eli nqanaba liphezulu lenkonzo linceda amashishini ukuba aqinisekise ukuba yonke imisebenzi ye-SEO efunekayo ukuze inyuke kwizikhundla ukuze ihlale apho iyenziwa rhoqo ngenyanga: ukusuka kwisakhiwo sokudibanisa ukuya kwindalo yomxholo, ukulungiswa kweempazamo zewebhusayithi, ukwenziwa kwekhasi, kunye nophando lwamagama.
Ukubiza amaxabiso e-SEO epheleleyo kuyahluka ngokweemfuno zeklayenti kunye neprojekthi, kunye neenkcukacha ezingaphezulu malunga namaxabiso zinokuqinisekiswa ngokuqhagamshelana nomnye wabameli bakaSemalt.
Yintoni i-analytics yewebhusayithi?
Ii-analytics zewebhusayithi ziindidi ezahlukeneyo zedatha efakiwe ngokubhekisele kwiwebhusayithi: ingaba yidatha yangaphandle ngokubhekisele kwizikhundla zeinjini yokukhangela kunye nendawo ekumgangatho okhuphisana nayo okanye idatha yangaphakathi ngokubhekisele kwitrafikhi, amaxabiso okuguqula, amaxabiso asezingeni, njl.
Le datha inokusetyenziswa ukuphucula iwebhusayithi ngeendlela ezininzi. Ngomnatha wolwazi entliziyweni yokuqhuba kakuhle kwemikhankaso yokuthengisa, kubalulekile ukuxhomekeka kuhlalutyo lwewebhusayithi kwimpumelelo yexesha elide kunye newebhusayithi.
Imizekelo yohlalutyo lwewebhusayithi inokubandakanya isikhundla sezikhundla zamagama aphambili, uluhlu lwamagama aphambili kwiwebhusayithi, iingxelo zokuqinisekiswa kwiphepha, uluhlu lweewebhusayithi ezikhuphisanayo kunye nokuhlelwa kwazo, ezinye izibalo.
I-Semalt ibonelela ngentla yesixhobo sohlalutyo lwewebhu somgca evumela abasebenzisi bayo ukuba benze uluhlu lwemisebenzi ngeshishini labo. Uluhlu lwegama eliphambili linokujongwa ngokukhawuleza ngesixhobo kwaye lubonise ukubonakala kwewebhusayithi kwi-intanethi.
Iwebhusayithi zokukhuphisana nazo ziya kuphononongwa. Iimpazamo zenzelwa kwiphepha okwiphepha Iingxelo zobume bewebhu ezinenkcukacha zinokutsalwa ngalo naliphi na ixesha.
Isixhobo sokuhlalutya iwebhusayithi seSemalt sinika abaphathi bewebhu amandla okuvavanya amathuba amatsha okuthengisa kunye nokufumanisa ukuba yintoni kanye kanye esebenzayo ngemizamo yabo ye-SEO kunye nokuba yintoni enokuphuculwa.
Isixhobo sohlalutyo lukaSemalt sithandwa kakhulu kwaye sinikezela uluhlu lweemodyuli ezibandakanya:
Iingcebiso zamagama aphambili abonelela ngezimvo zamagama aphambili eseshishini
Uluhlu lwamagama aphambili ukulandelela isikhundla segama elingundoqo kwi-injini yokukhangela mihla le
Uqwalaselo lophawu lwentengiso lubonisa ukuthandwa kwewebhusayithi
Imodyuli enombhalo obalulekileyo
Umhloli okhuphisayo ovumela abasebenzisi ukuba baphande imigangatho yabo babekhuphisana nabo kunye namagama aphambili
Kwaye uhlalutyo lwewebhusayithi oluhlalutya iwebhusayithi ukuze ilandelwe kweyona ndlela yokusebenza ye-SEO.
Iqela likaSemalt lifumaneka ngeentsuku ezingama-365 ngonyaka kunye ne-24/7 yokunceda abathengi bayo ukuba bamisele iinkonzo zabo zeMoto okanye ezigcwele zee-SEO okanye naziphi na ezinye iinkonzo anokunikwa yinkampani.
I-Semalt yentloko eKyiv, e-Ukraine kodwa iqela layo lehlabathi linika inkxaso kunye nonxibelelwano lwabathengi kwiilwimi ezininzi kubandakanya isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, iTurkey kunye nezinye.
Ngokungafaniyo nezinye iiarhente ezihlala zingenalo iqela lokwenyani, iqela likaSemalt liyafikeleleka kakhulu kwaye linokudibana naliphi na ixesha lokufunda ngakumbi malunga neenkonzo zabo ze-SEO, uhlaziyo lwewebhu, uphuhliso lwewebhu, iinkonzo zokudala ividiyo kunye nokunye.
Inyaniso enomdla: uSemalt unesinambuzane esithandekayo esaziwa ngegama likaTurbo osebenza njenge-mascot yenkampani kwaye uhlala eofisini. Ukuba ukhe watyelela uSemalt eofisini yabo eKyiv, ungalibali ukumisa uthi kuTurbo!
I-Semalt incede iinkampani ezininzi ukuba zifike kumanqanaba amatsha empumelelo yeshishini ngokufumana ngakumbi ukugcwala, ukuphucula ukuthengisa kwabo umxholo, uhlalutyo lokuhluma kunye nokunye.
Ngenxa yoko, inkampani inerekhodi ende yamakhulu abathengi abonelisekileyo, uninzi lwabo abathembekileyo abaphindayo.
Nabuphi na obo bungqina bunokujongwa kwicandelo labaThengi beKlayenti yewebhusayithi yeSemalt kwaye babandakanya ubungqina obungaphezulu kwe-30 + yevidiyo, ubungqina obungaphezulu kwe-140 + obubhaliweyo kunye nezifundo ezingama-24 ezineenkcukacha, kunye nolunye uhlolo kwiGoogle naku-Facebook.
USemalt upapashe inani elikhulu lezifundo ezinamatyala kwiwebhusayithi yakhe abonise ukonyuka kokugcwala ngenxa yokusetyenziswa kwe-Auto SEO okanye iinkonzo ze-SEO epheleleyo. Isifundo ngasinye semeko yaso sineenkcukacha ezingaphezulu ezinokufundwa ngokucofa kulo naluphi na udweliso.
Nabani na onomdla kwi-SEO ka-Semalt okanye kwezinye iinkonzo zokuthengisa unokundwendwela iwebhusayithi yabo ukujonga uluhlu olupheleleyo lwezifundo zamatyala ezibonisa ukusebenza kweenkonzo ezahlukeneyo zokuthengisa ezinikezi zinkampani.
Ukunxibelelana noSemalt ukuxoxa nge-SEO kunye nezinye iinkonzo kulula. Iwebhusayithi kulula ukuhamba kuyo ukufumana ukhetho lweNgcebiso ye-SEO yasimahla okanye uqalise ngengxelo yokwenza simahla kwiwebhusayithi.
I-Semalt ibonelela ngenkxaso yeelwimi ezininzi kunye neqela lehlabathi liphendula ngokukhawuleza kwimibuzo. Ukuqala ngoSemalt kunokuba yinto elula yokufumana ingxelo yasimahla yokusebenza kwewebhusayithi okanye unxibelelane nomnye wabameli babo ukuze asebenzise ithuba lokubonisana nge-SEO.